🥇 ▷ Waa maxay Voicepop sideese u shaqeysaa? ✅
Waa maxay Voicepop sideese u shaqeysaa?
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa codsi aad u xiiso badan oo aad u badan tahay inaadan ogeyn, laakiin in sida ugu dhaqsaha badan ee aad u ogaatid waxa ay sameyneyso, waad jeclaan kartaa waana lagugu dhiiri gelin karaa inaad ku dhejiso haddii aad raadineysay wax sidaas oo kale ah. Gaar ah, Waxaan kuu sharixi doonaa waxa Voicepop ay tahay iyo sida ay u shaqeyso.
Magaca magaceeda, waxaa loo muujiyey inay tahay waxa kuu saamaxaya inaad sameyso barnaamijkan kalabar, laakiin wax intaas ka badan ma jiraan. Haddii aadan aqoon, Voicepop waa codsi bilaash ah kaas oo loo heli karo macruufka iyo Android oo hadafkooduna yahay in la bixiyo qoraallo qoraallo qoraal ah oo qoraal ah.
Taasi micnaheedu waa Waxaad u tagi kartaa qoraalka maqalka ee aad ka heshay arji, kuwa ugu caansan waa WhatsApp ama Telegram, laakiin VoicePop waxay bixisaa taageero loogu talagalay qaar ka mid ah codsiyo dheeraad ah, sidaas darteed waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu xawilo ku dhawaad ​​qoraal kasta oo cod ah.
Xilligan la joogo, Codka Waxay la jaanqaadi kartaa WhatsApp, Telegram, Signal, KakaoTalk iyo LINE, in kasta oo ay tahay kiiska loo adeegsado Android, kumana bixiso taageerada Telegram. Waxaa suuragal ah, mustaqbalka codsiyada badan ayaa lagu dari doonaa kuwa loo oggol yahay inay ku gudbiyaan maqalka.
Voicepop waxay leedahay hawl gal aad u fudud mar haddii arjiga la soo dejisto oo lagu rakibay iPhone ama xarun kasta oo Android ah. Si ka duwan barnaamijyada kale, halkan looma baahna in la furo app laftiisa, laakiin lagu dhexgalidoonaa nidaamka lagu fulinayo himiladiisa.
Taasi waa in la dhaho, Waxay u muuqan doontaa sidii hal app oo dheeri ah oo lagula wadaagi karo maqalka WhatsApp-ka ama mid ka mid ah codsiyada aan ka faalloonay. Si aad u adeegsato waa inaad codka la wadaagto “Voicepop” isla markaaba waxaa laguu soo bandhigi doonaa qoraal waxa maqalkaas leeyahay.
Hadda oo aad ogtahay sida ay u shaqeyso, bal aan aragno tusaale sida loo sameeyo isticmaal codka codka lagu buuxiyo Si aad u sameyso waxa ay si sax ah u bixiso, inaad cod ugu gudbiso qoraal, laakiin marka hore kala soo bixi barnaamijka:
Kalasoco Voicepop-ka Android
U soo degso Voicepop macruufka
Miyaad soo degsatay oo aad rakibtay? Waa waqtigii la furi lahaa WhatsApp ama mid ka mid ah barnaamijyada aan soo sheegnay. Raadinta maqal, waxay noqon kartaa mid aad soo dirtay ama mid ka mid ah kuwii aad soo heshay oo aad rabto inaad ku hesho qoraal, haddaba raac tallaabooyinkaan:
Ku dhaaf codka la cadaadiyo oo guji “wadaag”, ama u gudbi xaalka iPhone. Gali liiska barnaamijyada u muuqda, ka raadi Voicepop iyo Touchez dusha.
Sug xoogaa daqiiqado ah iyo ku-qoritaanka farriinta codka ee qoraalka ayaa la bilaabayaa. Dhowr ilbidhiqsi ka dib, waxaad arki doontaa wax ka hooseeya qoraalka maqalka, oo ay weheliso luqadii lagu beddelay qoraalka iyo saxsanaanta tarjumaadda.
Waa inaad ogaataa in Voicepop uusan kaliya ogolaan ugu turjunto maqalka qoraallada Isbaanishka, waxaad kala dooran kartaa luqado dhawr ah (Talyaani, Ingiriis, Jarmal, Faransiis, iwm). Haddii aad doorbideyso, waad ku furi kartaa qoraalka transcript-ka ee barnaamijka laftiisa si aad u dhageysato maqalka oo aad u aragto qoraalka isla waqtigaas la helay.
Dheeraad ah, Voicepop ayaa kadhiga maqalka kaliya ilaa 2 daqiiqo. Qoraalkan ay soo saartey Voicepop markaa waa la koobiyeyn karaa oo lagu dhejin karaa codsi qoraal ah oo guurdoon ah si loo keydiyo, ama si fudud loo tuuro ama loo tirtiro haddii aad kaliya xiisaynaysay akhrinta qoraalka.
Maxaad kaloo ka ogtahay Voicepop? Waxaa jira faahfaahin aad u muhiim ah, qoraalka transcript gabi ahaanba sax ma ahan, sababta oo ah waxaad ka heli kartaa ereyo lagu sheegay maqalka aan ka muuqan qoraalka, laakiin ka tegaya taas, saxnaanta ayaa aad u sarreysa.
Horaad u ogtahay waa maxay Voicepop sideese u shaqeysaa, waa barnaamij maqal duub ah, waa ikhtiyaar aad u faa’iido badan oo xiisihi kara waqtiyada qaarkood, ama xitaa dadka dhegaha la ‘ama haddii aadan maqli karin waqtigaas (kulanka, joogitaanka dadka aan la aqoon, iwm.), maxaa yeelay adiga ka heli kartaa maqalka qoraal ahaan.